Uganda oo cabasho ka muujisay Qorshaha Xarumaha QM ee ku yaalla Entebbe loogu wareejinayo Nairobi. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Uganda oo cabasho ka muujisay Qorshaha Xarumaha QM ee ku yaalla Entebbe loogu wareejinayo Nairobi.
Madaxweynaha dalka Uganda ilaa dadka caadigfa ee dalkaasi ayaa qeylo-dhaan ka keenay Qorshaha Saldhigyadda QM ee ku yaallay Kampala loogu wareejinayo caasimadda dalka Kenya ee Nairobi.
Madaxweyne Museveni waxa uu dhawaan Qoraal u diray Xoghayaha Guud ee QM, Antonio Guterres oo kaga cawday Qorshaha Xafiisyadda waa weyn ee QM loogu wareejinayo Nairobi.
Xoghayaha Guud ee QM ayaa la sheegay inuu ansixiyey Qorshaha Xarun-gobaleedka Afrika bilowgii bishan loogu wareejin lahaa magaalladda Nairobi, balse Dowladda Uganda ayaa dibadbax ka muujisay arrintaasi.
Warbixin QM so osaartay ayaa muujinaya inay Nairobi tahay Hoyga Cusub ee Xarun-gobaleedka QM ee Afrika, halka caasimadda dalka Hangeri ee Pudapest noqon doono Xarun-gobaleedka QM ee Europe, iyadoo aasimadda dalka Meksiko ee Meksiko Siti noqonayso Xarun-gobaleedka Laatiin Ameerika
Dhinaca kale, ilaa labo million qof oo Ugandhese ah o odeggan magaalladda Entebbe ayaa saxiixay Qoraal Cabasho ah oo loo gudbiyey QM, si looga noqdo go’aanka Xarun-gobaleedka QM looga wareejinayo Uganda.
Boqolaal shaqaale oo badankooda u dhashay dalka Uganda ayaa ka hawl-gala Xarun-gobaleedka QM ee ku yaalla dalka Uganda.
Si kastaba ha ahaayee, Uganda waa dalka Ciiddanka ugu badan ku soo biiriyey Hwlgalka AMISOM, , waxayna Uganda haatan marti-gelisaa tirada ugu badan ee Qaxootiga ku sugan Qaaradda Afrika.
Taliyayaal ka tirsan Kooxda Daacish oo lagu qabtay Xuduudka dalalka Ciraaq iyo Suurya.